Guryaha naqshadaha guryaha - Shirkadaha dhismaha ee dhismaha - Dhismaha designer Galati pret - Nobili Naqshadeynta dhismaha, studio, dhismaha, naqshadeeyaha, shirkadaha, naqshadeynta, qiimaha
Guryaha gudaha ee dhismaha gudaha - Naqshada gudaha Galati
Kooxdayada hal-abuurka ah ee Nobili Design Galati waxay bilaabeen in ay ku lug yeeshaan naqshadda gudaha iyo qaabka naqshadaha dhismaha ee 3d guryaha, villa, makhaayadaha, baararka, hoteelada, meelaha ganacsiga, xafiisyada tan iyo 2008. Anaga oo ah, kaliya ma ahayn shaqo, laakiin waa qeyb ka mid ah nolosha nolosha. Khibradaheena iyo heerka adeegga sare ayaa naga caawiyey inaan noqono mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee caanka ah ee muhiimka ah. Illaa iyo hadda, waxaan ku guuleysanay tiro fara badan oo gudaha ah oo gudaha ah oo loogu talagalay goobaha guryaha iyo goobaha ganacsiga. Waxaan sidoo kale fulinay mashaariicda 3D ee guryaha mustaqbalka, barkadaha, goobaha ganacsiga, xarumaha isboortiga, makhaayadaha, baararka, pizzerias, xarumaha qurxinta iyo wax kaloo badan. Intaas waxaa dheer, waxaanu qabanqaabin karnaa xafiisyo ay ku shaqeyn karaan shaqaale raaxo leh.
Ma jiraan maqaalo ku jira qeybtaan. Haddii ay ku jiraan boggaan boggan, waxay ku jiri karaan maqaalo.